23 July 2020 Volume :8 Issue :32
Abanye abafundi be-Onazi base-CCMS nama-laptop abo amasha.Click here for English version
I-Centre for Communication, Media and Society (CCMS) ngaphakathi kweSikole Sezifundo ngeNhlalosintu Elandelwayo inikele ngama-laptop nezikhwama zawo eqoqweni labafundi abenza iziqu ze-onazi ngowezi-2020.
Lo mnikelo omkhulu wenkampani yezokuxhumana i-RewardsCo ufike ngesikhathi esimqoka lapho iNyuvesi isishintshile ekufundiseni emabaleni ayo kodwa isifundisela buqamama ukuqinisekisa ukuphepha nenhlalakahle yabasebenzi nabafundi.
UMholi wezeMfundo e-CCMS uSolwazi Eliza Govender ubalule ukuthi ‘abasebenzi base-CCMS basebenze ngokuzikhandla ukulungiselela ukufundisa buqamama kodwa lo mnikelo omkhulu wase- RewardsCo wenze ukuthi abafundi bakwazi ukufundela kude.’
Umfundi we-Onazi e-CCMS uNks Minenhle Mnguni uthe: ‘Bengingakwazi ukwenza umsebenzi wesikole, kwesinye isikhathi umakhalekhukhwini ungavumi ukuthi ngithole amanothi ku-Moodle ngenxa yesikhala kodwa namuhla ngiyakwazi ukwenza umsebenzi ngaphandle kwezihibe. Siswele imilomo yokubonga eyizinkulungwane kubasebenzi base-CCMS nabaxhasi bethu ngokusipha lama laptop.’
UMnu Simphiwe Mabone wengeze ngokuthi: ‘Kube wunyaka onzima lona kimina njengomfundi kusukela amanyuvesi eshintshele ekufundiseni ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe. Bengingenayo i-laptop kanti bekungafundeki ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe. Ngifisa ukubonga uSolwazi Eliza Govender nethimba lase-CCMS ngokwenza konke okusemandleni alo ukuthi ungalahleki unyaka wokufunda. Kusezandleni zethu konke manje nokuthi sisebenzise leli thuba ngobuhlakani.’
UMqondisi oPhethe e-RewardsCo uMnu Dylan Koen uthe: ‘I-RewardsCo ikholelwa ekwenzeni ikusasa eliqhakazile kuwona wonke umuntu. Sijabule ukwazi ukuthi umnikelo wethu e-UKZN usize abafundi ngezinto namathuba okufunda, ukukhula nokuchuma emikhakheni eziyikhethile. Imfundo iyisisekelo seNingizimu Afrika engcono kanti sibona ubuhle bokutshala kulo mkhakha ukuthuthukisa isizwe sethu.’
I-UKZN Foundation iyabonga ngosizo ehlale iluthola kwi-RewardsCo. UMqondisi we-Foundation uSolwazi Anesh Singh uthe: ‘Ngenxa yalolu sizo abafundi ebali-18 bathole ithuba lokuqeda izifundo zabo ngalesi sikhathi esinzima. Lo mnikelo usenza sikwazi ukufeza iphupho lethu e-UKZN.’